China folding crate Kugadzira uye Fekitori | Lonovae
Vegetable Folding Crates ibhasikiti rinoshandiswa kuchitoro kuti uve nemuriwo, michero uye tudyo. Isu Lonovae tiri kupa akanakisa epurasitiki Makreyiti. Iyo yakapihwa crate inogadzirwa nerubatsiro rwegiredhi repamusoro mbishi zvinhu zvinoenderana nenyika dzepasi rose. Vatengi vanogona kuwana ino crate kubva kwatiri mumhando dzakasiyana, dhizaini, mavara uye zviyero zvichienderana nezvinodiwa zvavo.
Chigadzirwa Chigadzirwa Kupeta Crate-01
Divi 600 * 400 * 110mm
Kurongedza 10PCS / katoni
Chigadzirwa Chigadzirwa Kupeta Crate-02
Divi 600 * 400 * 170mm
Chigadzirwa Chigadzirwa Kupeta Crate-03
Divi 600 * 400 * 220mm
Chigadzirwa Chigadzirwa Kupeta Crate-04
Divi 600 * 400 * 300mm
1.High mukurumari: Tine wakaisvonaka hunoshamisa uye anogona kuremedza akatakura mutoro. Iyo yepasi ine tambo dzakawanda dzakasimba kuona kuti hapana kumanikidza mukuremedza.
2. Kurema kurema.
3. Kupera kwakanaka: Tine kucheka kwakatsetseka. Isu tinoshandisa iyo lasering yekucheka uye punch uye shear panguva imwechete. Pane kucheka kutsetseka uye hapana ganda rinodiwa.
4.Long Hupenyu: Isu tinoshandisa iyo nyowani nyowani PP vigin materils. Isu tinoedza izvo zvinhu kuburikidza neSGS yemhando yekuyedza uye garantee iwo mhando.
5. Rigid Kuvaka.
6.Tinokwanisa kugadzirisa Logo kune vedu vatengi nekuda kwezvinodiwa.
7.Tine zvakawanda zvekuchengetedza uye makore mazhinji ekugadzira kutumira izvo zvinhu nekukurumidza.
Kune zvinodikanwa zvemhando yepamusoro, isu veLonovae tine gumi nemaviri emhando yekuumba jekiseni kuHaiti, uye inoshandisa mota dzeSino-Korea dzematombo, nezvimwewo. Kune zvinodikanwa zvemhando yepamusoro, fekitori ine akawanda eHaiti jekiseni kuumbwa michina uye inoshandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa kubva kuSino -Korea Petrochemicals. . Kuti tishandire vatengesi vakura vekune dzimwe nyika uye vekunze, isu tine simba rakasimba rekugovera, riine avhareji zuva nezuva yekugona inokwana inopfuura zviuru gumi zvezvigadzirwa zvepurasitiki zvakadai semabhasiketi ekutenga uye mapallet. Yedu kambani inonamatira kune basa rebasa rekumisikidza bhizinesi nekutendeseka uye kuhwina nemhando yepamusoro, uye inoshumira vatengi vedu nemoyo wese.
Tine yakakwira-yakamisikidzwa timu yekutsvagisa kuti igadzire, dhizaini uye ishumire.
Isu tine akaomarara kugadzirwa kuyedza maneja. Isu tine maitiro akanaka, yakanakisa kuyedza nzvimbo uye epamberi manejimendi manejimendi yekupa yakakwira mhando nhumbi.
Tine hukuru hwakasiyana hwezvigadzirwa uye chimiro chitsva, chaiyo maitiro.
Pashure: Muriwo michero kupeta crate